ကြေးမုံလေးသာအတော်ဇုံး Best | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကြေးမုံလေးသာအတော်ဇုံး Best
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 31, 2012 in Critic | 12 comments
အလိမ်မခံရအောင် သူ့လို ရပ်ကြည့်သွား...
ဩော်..လူဒွေ လူဒွေ…. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ လည်လှလည်လှနဲ့၊ အလိမ်ခံလိုက်ရတာ သိဂျဘူး… သဂျီးကစလို့ ရွာလုံးဂျွတ်.. ဆြာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပြူတာဆြာတွေဒဲ့.. သင်္ဘောမောင်းသူ၊ သင်္ဘောဒီဇိုင်းဆွဲသူလည်း ပါလိုက်သေး။ အချို့များဆို ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတောင် လုပ်နေသတဲ့….လခစားဝန်ထမ်းဆိုတာ မပြောနဲ့ဒေါ့…။ ဒါနဲ့များ မြန်မာပြည်ကြီး ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးအောင် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြအုံးမတဲ့၊ တတပ်တအား ကြယ်ငါလေးတွေကို ပင်လယ်ထဲ ပြန်ပစ်ထည့်ပေးအုံးမတဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အလိမ်မခံရအောင် အယင်လုပ်ကြပါ..။ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း…. ကြောင်လိမ်တာ လူခံရဒယ်လို့…..။ သူတို့ထဲမှာ ကြေးမုံလေးတယောက်ပဲ လွတ်တယ်……။ ရွာထဲမှာ ကြေးမုံလေးသာ အတော်ဇုံး.. ဒါကြောင့်မို့ သူ့ကိုအခြစ်ဇုံး…။
ရည်ညွှန်း။ Happy Birthday To Me – ကြောင်ကြီး |273- Hits|
Posted by ကြောင်ကြီး on Mar 29, 2012 in My Dear Diary | 56 comments catology60
ကတ်ချုပ်ကြီးဆိုတာ မေ့သွားကြတာကိုး ….. အခုလဲထပ်လိမ်တာလားမသိ…
မီးဒုတ် ဗျို့ ………………
တူကလိမ်တယ် ဟင်းဟင်း လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ကိုဒင်းကိုထုပစ်မယ် အာပီဂျီနဲ့သမမယ်
နှူးကလီယားနဲ့ကိုချဲပစ်မယ် ကြောင်ကြီးဘပ်ကစ် ကြောင်မလေးတွေမျိုးဝိုင်းဖြုတ်တာခံရပါစေတော်
ဟင်းဒင်းမျိုးပြုတ်မှ ကြောင်ဂိုဏ်းတုန်းသွားမှာ……… အခြော်တကောက်ကြီးနဲ့ညားပါစေတော်………..
ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့… မွေးနေ့ဆုတောင်းစာများမပို့ပေးခင် ဦးကြောင်ကြီးရဲ့ကြံစည်မှု ဆိုတဲ့ပုံထဲကလို
ကြည့်ချင်ရင်သများပို့စ် “ရွာသူားနာမည်များဟာသလုပ်လို့ထား” ဒီထဲကိုသွားရှုစားပေတော့…..
ပုံနောက်တီးနောက်တောက်ဂိုဏ်းသား…. ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် …. ကြောင်ဂိုဏ်း၏ဋ္ဌာနချုပ်ဂိုဏ်း……
အခြစ်ဇုံးဆုိုတော့ ရေခဲခြစ်တဲ့ဟာနဲ့ချစ်တာလား ဥကြောင်
သများလည်း ကြေးမုံလေးကို ညှစ်ချစ်တယ် မှားလို့ ချစ်ခင်တယ်
ဘတ်ဒေးပြောပြီး ဘယ်နှစ်နှစ်လဲမပြောဘဲနဲ့ ဘတ်ထားပြန်ပြီ
သူများဘတ်ဒေးထဲ သောက်တင်းတုတ်ရတာ အားတော့နာတယ်
( သင်္ဘောမောင်းသူ၊ သင်္ဘောဒီဇိုင်းဆွဲသူလည်း ပါလိုက်သေး။ အချို့များဆို ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတောင် လုပ်နေသတဲ့….လခစားဝန်ထမ်းဆိုတာ မပြောနဲ့ဒေါ့…။ ဒါနဲ့များ မြန်မာပြည်ကြီး ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးအောင် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြအုံးမတဲ့၊ တတပ်တအား ကြယ်ငါလေးတွေကို ပင်လယ်ထဲ ပြန်ပစ်ထည့်ပေးအုံးမတဲ့။ )
သူနဲ့ တွေ့ ပြီး
သားတို့ က ဘာ ဆက်လုပ်ရမှာရဲ ဟင်င်င်င်င်င်င်…..
ကျား ကျား ပြေးကြည့် မဟုတ်
ကျားဗျ ကျား လာကြဘာအုံး ကယ်ကြဘာအုန်း –ပြေးကြည့်မဟုတ်
တစ်ကယ်လာပြီဗျ၊ ကျုပ်နားရောက်နေဘီ -ကျားပါးစပ်ကြီးနဲ့နီးလာပြီ ကိုက်တော့မယ်ဗျ အာမလေးဗျ– ကယ်ကြဘာအုန်း —- ဘယ်သူမှမလာဒေါ့ဘူး သေပေ့ချေ။
သူဂလေ ဘတ်ဒေး ရှိုဘီး လူဒွေကို ဘတ် ဒဲ့ကြောင်။
ကြံ့ဖွတ်နဲ့တွေ့ပါစေ ဒါမှ သူပြန်ခံရမယ်—- ဟီး ဟီး။
ကြေးမုံလေးက ဒူတုံး… ဦးဦးကြောင်ကြီး…. တူ့လို ကြည့်ချင်ဘေမယ့် တူ့ရိုအရပ်ရှိဝူး…
ကိုင်မထားလို့ ယိုင်သွားရင် ဒိုင်စားလိမ့်မယ်
(ကြယ်ငါလေးတွေကို ) တဲ့… သတ်ပုံမှားနေတယ်။
မနိုင်ရင် နိုင်ရာနဲ့ ပြောမယ်
တစ်ခါတစ်ခါ တော့ လဲ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ကုန်းလိုက်မိပြီးကာမှ ပေါ်သွားလို့ “အရှက်ပြေ” ပြန်ဖုံး သင့်လဲ ဖုံးကြရပါတယ်။
ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အိုင် တို့ က သဘောထားကြီးပါတယ်။ ;-)
ဒါ လွှတ်တော် ထဲမဝင်ခင် အပြင်မှာ ကြိုကျင့် နေတာလို့ တွေး ကြပါတယ်။
ပြော..ပြော ကကြောင်ကြီး စိတ်ချမ်းသာသလိုသာပြော။
လွှတ်တော် မှာ ဒီနည်းမျိုးတွေ ဘက်စုံသုံးရမှာကော။
အော်… လိမ်တာတဲ့လား ယုံပါဘူး။ ကြောင်သက် မဟုတ်ရင် သေချာတယ် လူသက် မွေးနေ့။ တခုခုတော့ ဟုတ်ကို ဟုတ်နေရမှာ ။ သိကိုသိနေတယ် မလိမ်ဖူးဆိုတာ ။ ရွာသူားတွေများ ကြောင့်လက်ထဲက ကြွက်ကို ကစားသလို လာကစားလို့ ဘယ်ရမလဲ ။ ယုံဘူး။
ထင်တာမမှားရင် ဧပရယ်ကို fool ချင်နေတာမလား ။
စောစောက မွေးနေ့မှာကတည်းက ပြောထားပါတယ်။
ကဲ- ခုတော့ ပေါ်ပြီ မဟုတ်လား။